Fagaaraha Cas ee Moscow ayaa la xiray kadib markii darbigii Kremlin uu soo dumay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Fagaaraha Cas ee Moscow ayaa la xiray kadib markii darbigii Kremlin uu soo dumay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Fagaaraha Cas ee Moscow ayaa la xiray ka dib markii gidaarka Kremlin uu soo dumay.
Dabeylo xoog badan ayaa ku garaacday Moscow, taasoo khalkhal gelisay waddooyinka iyo xitaa inay duminayso jaranjarada, oo waxyeello u geysata derbiyada Kremlin ee sumadda leh.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hore ugu eedeeyay kulaylka cimilada ee aadka u daran, sida dababka waaweyn ee duurjoogta ah iyo daadadka ba'an,
Qoraal lagu daabacay bogga wararka ee dowladda hoose ee Moscow, mas'uuliyiinta ayaa uga digay dadka deegaanka inay taxaddar muujiyaan, iyagoo sheegay in dabayshu ay gaari karto 20 mayl saacaddiiba.
Mid ka mid ah qeybaha derbiga Kremlin ayaa gabi ahaanba la la'yahay ka dib markii uu dhacay dabeysha.
Dabeylo xooggan, roobab iyo roobab wata roobab ayaa maanta burburiyay caasimadda Ruushka ee Moscow.
Dabaysha xoogga badan ayaa sababtay gumaad baahsan, garaacidda geedaha, u dirtay qasacadaha qashinka oo u duulaya waddada iyo xitaa waxyeello u geysta derbiga MoscowQalcadda caanka ah ee Kremlin.
Moscow mas'uuliyiinta magaalada ayaa bayaan ku daabacay bogga wararka dowladda hoose, iyagoo uga digay dadka deegaanka inay taxaddar muujiyaan, sababtuna waa dabaylaha oo gaari kara 20 mayl saacaddiiba.
“Fadlan joog gudaha haddii ay suurtogal tahay inta lagu jiro cimilada xun,” ayaa lagu yiri bayaanka rasmiga ah, “aad uga taxaddar waddada, iska ilaali inaad gabbaad ka dhigto geedaha u dhow oo ha dhigin baabuurta u dhow.”
Dhammaan tuducyada ku MoscowFagaaraha caanka ah ee Red Square ayaa laga xannibay waddooyinka u dhow ka dib markii qalfoofka uu qayb ahaan ka soo duntay Kremlin derbiga horraantii maanta.
Sida laga soo xigtay gurmadka degdegga ah, qaab -dhismeedka Kremlin derbigii ayaa soo dhacay, wuxuuna waxyeelleeyay mid ka mid ah darbiyada derbiga.
Goor sii horreysay, Xafiiska Adeegga Difaaca Federalka ee Xafiiska Arrimaha Dadweynaha ayaa ku dhawaaqay in shilku u dhacay dabaylo xooggan, lama soo sheegin wax dhaawacyo ah.
Sida laga soo xigtay Putin, tirada sii kordheysa ee dhacdooyinka saadaasha hawada ayaa ah “haddii aysan gebi ahaan ahayn, markaa ugu yaraan ilaa xad, sababtuna tahay isbeddelka cimilada adduunka ee qarankeenna.”